← मनु लोहोरुङ राईका १८ मुक्तकहरु
केस्रा : अधिकार →
प्रभु – पति
प्रभा – प्रभुकी पत्नी
प्रमोद – प्रभा र प्रभुको छोरो
प्रमिला – प्रभा र प्रभुकी छोरी
प्रकाश – प्रभा र प्रभुको छिमेकी
प्रणिता – प्रकाशकी पत्नी
प्रपन्नाचार्य – गाउँका जान्ने बुझ्ने मानिस
प्रकृति – प्रपन्नाचार्यकी पत्नी
अन्य – मञ्चमा भौतिक उपस्थिति देखाउने तर अमुक व्यक्तिहरू
स्थान – पीपलको चौतारी
समय – दिनको नौ बजे
(हातमा घण्टी लिएको, निधारमा चन्दन घसेको, गेरुवस्त्र धारण गरेको प्रभु चौतारीमा बसेको छ । नजिकै कमण्डलु छ । छेउमै तुल टाँगिएको छ जसमा लेखिएको छ—
पत्नी पीडित महासंघको दोबाटे कार्यालय
पत्नी पीडितहरू — एक हौं
पीडाको कहिरन — लेखौँ ÷ लेखाऔँ
प्रभु ः–(माइक्रोफोनमा बोलेको जस्तो गरेर) हेलो, हेलो, हेलो । आउने जति आउँनुस् । जाने जति जानुस् । जोजो जानुहुन्छ, जानुस् तर पीडा बोकेर फेरि आउँनुस् । पीडा अरूले दिएको हुनुहुन्न । मात्र पत्नीले दिएको पीडा हुनुपर्छ । आजकी एक्काइसौँ शताब्दीकी पत्नीले दिएको पीडा हुनैपर्छ । पेट नभरिउँञ्जेल पीडा खानुस् । भरिएपछि यहाँ आउनुस् । पीडा जति यहीँ खन्याउँनुस् । अनि रित्तो पेट पार्नुस् । यो ठाउँ पत्नी पीडित पतिहरूको पीडा जम्मा हुने पोखरी हो । (यत्ति भन्दा नभन्दै मान्छेहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छन् ।)
प्रकाश ः– (नमस्कार गर्दै) प्रभु, पीडाको पोखरीमा के फुल्छ ? के कमल फुल्छ ?
प्रभु ः– (नमस्कार फर्काउँदै) हैन, हैन । कमल फुल्दैन । यहाँ फुलेकी कमली अन्त्य भएको इतिहास छ । हुर्केकी मखमली ओइल्याएको प्रमाण छ । तिनै मखमलीहरू बाइसौँ शताब्दीमा पनि पतिहरूलाई पीडा दिन सक्षम हुन्छन् । तिनीहरूलाई आजै ओइल्याउन आवश्यक छ । तिनीहरूलाई पाठ पढाउन पनि पोखरी निर्माण हुनुपर्छ ।
प्रणिता ः– (अघि सर्दै) उसो भए यो नाङ्गो नाच यहाँ किन ? मान्छे बहकाउन कत्रो नाटक !
प्रभु ः– (तथास्तु भन्दा हात उठाएझैं गरेर) शान्त, शान्त बालिके । मसँग पीडाको सानो कुवा छ । त्यस्तै कुवाहरूको मेल र योगबाट म पोखरी निर्माण गर्न चाहन्छु । त्यस पोखरीमा कमलीहरूको इतिहास फुलाइरहेको हुन्छु । हुर्किरहेका भविष्यका मखमलीहरूलाई पाठ सिकाइरहेको हुन्छु ।
प्रणिता ः– (रिसाउँदै) धत्, यो म यत्री स्वास्नी मान्छेलाई पनि बालिके भन्छ । नारीको तागत नूनभन्दा चर्को छ । नारीको आवाज खुनभन्दा महंगो छ । नारीको नसा खोर्सानी भन्दा पनि खरो छ । हाम्रो एक चुड्कीमा सारा पतिहरू पत्नीकै वरिपरी (जाँतो घुमेझैं हात घुमाउँदै) ¥याइँ¥याइँ घुम्छन् र सुख जति धुलोपिठो पार्छन् । हाम्रो सुख तिमेरूको दुःख हुन्छ । हाम्रो एक चुड्की तिमेरूको फुर्ती हुन्छ । पहिले पत्नीलाई दुःख पतिलाई सुख, अहिले पत्नीलाई सुख पतिलाई दुःख । नारी–पुरुष बराबरी । सारा पतिका पीडक पत्नीहरू— जिन्दावाद ! सारा पत्नीका पीडक पतिहरू— मुर्दावाद ! (ऊ आफ्नो पति प्रकाशकोे कठालो समाएर मञ्च बाहिर ल्याउँछे ।)
प्रभु ः– देख्नुभो त, महानुभावहरू ! पत्नी राज्यमा पतिको कस्तो हालत हुँदो रहेछ । महानुभावहरू ! (आफ्नो घर देखाउँदै) उः त्यो घर छ नि । हो, त्यस घरमा एक पत्नी महारानीको खोपी छ । मौसूफ त्यहीँ विराजमान होइबक्सन्छ । विहान सवेरै चिया–नास्ता ज्युनार गरिबक्सन्छ । विहान आठ बजे मोर्निङ्ग वाकका लागि सवारी होइबक्सन्छ । नौ बजेसम्ममा पतिले खाना तयार पारिसकेको हुनुपर्छ । पत्नी महारानीका निमित्त पतिले बाहिरीदेखि भित्रीसम्मका लुगा वाथरुममा टक्रयाइसकेको हुनुपर्दछ । मन तातो पानीले ट्याङ्की भर्दिसकेको हुनुपर्दछ । स्नान पछि मौसूफको डिनर ज्युनार हुन्छ र अफिसतिर सवारी हुन्छ । त्यसपछि भने सञ्चको श्वास फेर्न पाइन्छ । फेरि साँझमा त उही कडा ड्युटी गर्नैपर्छ । मौसूफ सरकारका आदेशहरू अक्षरशः पालना नगरे के–के भोग्नुपर्छ, पर्छ ।
प्रपन्नाचार्य ः– के–के भोग्नुपर्छ ? हामी पनि सुनौँ न ।
प्रभु ः– के भन्नूँ ! भन्न पनि लाज हुन्छ ।
प्रपन्नाचार्य ः– भएको कुरा भन्नलाई केको लाज । लाज मान्ने मान्छे भए यत्रा नाराहरू लेखेर किन मान्छे भेला पाथ्र्यौ ?
प्रभु ः– लौ त भन्छु । त्यसको नालीबेली छैन । लेखाजोखा छैन । (रुन्चे स्वरमा ) गल्ती गरेमा मात्र दुई घण्टा मुर्गा बन्नुपर्छ । मात्र आधा घण्टा डान्स गरेर पत्नी महारानीलाई खुस तुल्याउँनुपर्छ । के गर्नु बाचामा बाँधिए पछि निल्नु न ओकल्नु हुँदो रहेछ । अति भएपछि मात्र बल्ल होस खुल्यो । होस खुलेको छ र पो म यहाँ तपाईंहरू सामु छु । नत्र त गुलामी गरिरहेको हुनेथिएँ ।
प्रकृतिः– महिलालाई मैला बनाउँन खोज्दा यस्तै हुन्छ ।
प्रपन्नाचार्य ः– अनि यस चौतारीमा किन आएका त ? किन यो संगठन खोल्यौ ?
प्रभु ः– किन भन्नूँ । आफूलाई परेको भए चाल पाउँनुहुन्थ्यो । आजसम्म म जीवनमा १० पटक मुर्गा बनिसकेँ । १५ पटक महारानीलाई डान्स देखाइसकेँ । हिजो बेलुका खै कहाँ सानो त्रुटी भएछ । आज विहानै सजाय भोग्नुपर्ने फैसला सुनाइयो । पहिलेकै दरमा भए त ठीकै थियो । चारैतिर महंगीले आकाश छोयो रे । हरेक कुराको भाउ बढेजस्तै सजायको पनि भाउ बढ्यो रे । अब मैले दुई घण्टाको बदलामा तीन घण्टा मुर्गा बन्नु पर्ने भो रे । आधा घण्टाको सट्टामा एक घण्टा डान्स गर्नुपर्ने भो रे । जब सजाय बढाइएको ज्ञात भो, ममा विद्रोह जाग्यो । विग्रेको मान्छेको भत्केको घर भत्केपछि केको डर । सन्यास जीवन धारण गरियो । बस् लण्ठासाफ !
प्रकृति ः– कुरा त ठीकै हो । बाचामा जो बाँधिने काम गर्छ, त्यस अनुसार काम फत्ते गर्नैपर्छ । तिमी उम्कन पाउनौ ।
प्रभु ः– नियमलाई गोली मार्दिएँ । म अब घर फर्कन्न । मैले पूर्णरुपेण सन्याश्रम लिएँ । म पीडा खाएर प्राण बचाउँदिन । म साधुको भेषमा सोझा पतिहरूलाई उकास्छु र पत्नीहरूलाई पीडित बनाउँदै जान्छु । (केही कडा स्वरमा) अनि सबैले भेट्नुहुनेछ । प्रत्येक घरमा पीडा सहेर बाँचेका पत्नीहरू ।
प्रपन्नाचार्य ः– एउटा बिराउने सारा पिराउने । यो त जायज काम होइन त ।
प्रभु ः– जायज र नाजायजको तुलना अब सिद्धान्तमा हुन्छ । मेरो सिद्धान्तले भन्छ— जति पति पीडामा बाँच्ने पत्नीहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ त्यत्ति नै पत्नी पीडामा बाँच्ने पतिहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ । यो नियम माँग र पूर्तिको नियमसँग मिल्छ । अर्थात् पत्नीको मूल्य घट्दा पतिको मूल्य बढ्छ भने पत्नीको मूल्य बढ्दा पतिको मूल्य घट्छ । मेरो उद्देश्य सारा पत्नीहरूको सम्मान क्षय गराउँनुछ । तसर्थ महानुभावहरू ! आउँनुस् पतिहरूको सम्मानमा वृद्धि गराऔँ ।
प्रकृति ः– उसो भए तिमी पत्नीलाई खेलौना नै सम्झन्छौ, हैन ?
प्रभु ः– कागले आफ्नो नाम आफै काड्छ । मैले भन्न पर्दैन ।
प्रपन्नाचार्य ः– प्रकृति ! तिमीले धन्दा मान्नुपदैन । अब तिमी घर जाऊ । पति एउटा पाङ्ग्रो पत्नी अर्को पाङ्ग्रो । लोग्नेस्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्ने उखान बुझेकै हौली । मैले धेरै भन्नु नपर्ला । (ऊ जान्छे । एकै क्षणमा प्रभुका छोराछोरी क्रमशः प्रमोद र प्रमिलाको प्रवेश हुन्छ ।)
प्रमोद ः– (आत्तिएझैं गरेर) बाबा, बाबा आमाको नाना खै ?
प्रभु ः– अझ पीडा थप्न आएका तिमेरू ! तेरी आमाका नाना थानामा पुगे ।
प्रमिला ः– बाबा, भोक लाग्यो ! खाना !
प्रभु ः– अब आमाले मामा बोलाउँछे । मामाले खाना बनाउँछ । त्यत्तिञ्जेल तिमेरू चाहिँ हावा खाएर बस्ने । अहिले जाओ, झट्टै गइहाल । (केही बुझेजस्तो केही नबुझेजस्तो गर्दै दुबै बाहिरिन्छन् ।)
प्रभु ः– यिनीहरू मेरो सेरोफेरोबाट त हटे । प्रणिताले प्रकाशलाई आफ्नो पञ्जामा पारेर पीडाको पहाड बोकाएझैं आज सारा पतिहरू पत्नीको पुच्छर भएका छन् । मेरो यस महान् अभियानमा साथ दिन खुलेर कोही आएनन् । हुन त, पुच्छर हुनु र पुच्छर पार्नु पौराणिककाल देखिकै रीतिथिति हो ।
प्रपन्नाचार्य ः– अनि त्यसको उलंघन गर्न हज्जार जिब्रा भएका शेष नागले त सकेनन्, महादेवको त वसको कुरा रहेन भने तिमी हामीको के जोर चल्छ र ? महिलाको मन बुझेमा नै महान् काम मज्जाले फत्ते गर्न सकिन्छ ।
प्रभु ः– (हेलैसित हात जोडेर) पत्नीभक्त परमेश्वर प्रपन्नाचार्य प्रभु ! प्रष्ट सुन्नुस् । आफ्नी पत्नीलाई घर पठाएर पत्नीका वारेमा प्रकार प्रकारका कुरा प्रकट गर्न लाज लाग्दैन तपाईँलाई । सारा पतिहरूको पीडा परपर पार्ने हो भने मनैदेखि, तनैदेखि फरक्क फर्किनुस् । आउनुस् यस महायज्ञमा साथ दिनुस् ।
प्रपन्नाचार्य ः– प्रभु ! तिमीले गलत बुझेछौ । तिम्रो दुःख साराको दुःख हुनसक्दछ । दुःख परेकाहरूले मात्र तिम्रो साथ दिनुपर्छ भन्ने छैन । नारी नाम महान् छ । यही महानता भित्र तिमी पनि अल्झियौ । म पनि बल्झिएँ । साथ होसियारको लिनुपर्छ, वात काम चोरको पनि सुन्नुपर्छ । काम नाम राख्ने गरी गर्नुपर्छ ।
प्रभु ः– हामीकहाँ यही छ । आज जसलाई जे पर्छ उसले मात्र सहन्छ । भोलि जसलाई जे पर्ला उसैले मात्र सहला । एकले अर्कोलाई अर्कोले एकलाई सहयोग गर्ने र सहयोग लिने चलन नै छैन । हिजो छिमेकीकहाँ चोरले चोरी गर्यो म टुलुटुलु हेरी बसेँ, भोलिपल्ट मकहाँ चोरी गर्ला ऊ टुलुटुलु हेर्ला । चलन यस्तै छ । तर आज चाहिँ मलाई पर्यो, मजस्तै पर्नेहरू आओ । सडक जाम गरौँ । आम हडताल गरौँ । पत्नी पीडित पतिहरूको महासंघको विस्तार गरौँ । समस्या अझै चर्काऔँ । पत्नी विरोधी माहोल बनाऔँ । समस्या जन्माऔंँ । समस्या खुवाऔंँ । समस्या लगाऔंँ । समस्या नचाआँैं ।
प्रपन्नाचार्य ः– (कडा स्वरले) समस्या ! समस्या !! समस्या !!! यता समस्या, उता समस्या, जताततै समस्यै समस्या । समस्याको यस महासमुद्रबाट सरासर सास्ती मुक्त गर्न नसक्नु सरोकारवालाहरूको सोचको कमी हो । तसर्थ पुरुषहरू महिलाकहाँ जाऔंँ । महिलाहरू पुरुषहरूकहाँ धाऔंँ । आपसमा मिलेर मिलन राज्य बनाऔंँ । विछोडको विद्रुप विष नपिआँैं, नपिलाआँैं ।
प्रभा ः– (ताली बजाउँदै मञ्चमा एक्कासी देखापर्छे ।) महान् महान् महानुभावहरू ! महाशयहरूको यस महान् मञ्चमा म मेरा मसिना कुराहरू राख्दै छु । (प्रभुतिर फर्केर) मेरा पति महाशयको नजरमा यो संसार सबैका लागि र सधैँका लागि स्वर्ग थियो । म नयाँ छँदा मलाई उहाँ स्वर्गकी अप्सरा बनाएर राख्नुहुन्थ्यो । म उहाँकी भोग्या वस्तु थिएँ । न म काम गर्न पाउँथेँ न उहाँ नै दुई पैसा कमाउँनुहुन्थ्यो । मैले पुर्खेउली धन जोगाउन हरप्रयत्न गरेँ, सबै प्रयत्नहरू बालुवामा पुल बनाए सरि भए । म रातोदिन उहाँलाई खुशी पार्न, मनोरञ्जन दिन खटिएकी थिएँ । त्यस बेला आम्दानी चाराना हुन्थ्यो भने खर्च सोह्र आना हुन्थ्यो । उहाँ वर्ष पाँचेकमै करोडपतिबाट कंगालपति हुनुभयो । उहाँसँगसँगै म र हाम्रा यी (छोराछोरीतिर हेरेर) दुई सन्तान पनि कंगालपतिका हिँस्सेदार भयौंँ । हाम्रो भविष्य कुहिरोको काग भयो । ठूलो प्रलय आएपछि मैले एउटा सर्त तेर्साएँ ।
प्रपन्नाचार्य ः– सर्त के थियो ?
प्रभा ः– (प्रभुतिर संकेत गदै) भन्नुस्, सर्त के थियो ? मुख खोल्नुस् ।
प्रभु ः– (मलिन स्वरले) सब थोक नासिएर, सब थोक मासिएर मरुभूमि भएको यस घरलाई म पहिलाझैँ हराभरा पार्छु, सदाबहार राख्छु भन्ने यिनको सर्त थियो ।
प्रभा ः– मुख्य कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कुरो चुरोमा नै पुगेको छैन । धन छउँञ्जेल उहाँले मलाई सक्तो सताउँनुभयो, भरमग्दुर नचाउँनुभयो । पुर्खेउली धन छउँञ्जेल धनको चुरिफुरी देखाउँनुभयो । हामीलाई पनि जोड्न दिनुभएन । कंगालपति भएपछि मैले प्रस्ताव राखेँ– अब म कमाउँछु । मेरो कमाइले बाँचुञ्जेल मेरो भनाइ अनुरूप तपाईं चल्नुपर्छ । उहाँले त्यत्तिखेर स्वीकार्नु भयो । जे भोगेकी थिएँ मैले उहाँलाई त्यही मात्र गर्न लगाएकी हुँ । यसमा मेरो के दोष ? शुरुवात उहाँले नै गर्नु भा‘को हो क्यारे । अहिले यो विद्रोह ? महान् महान् महानुभावहरू ! महाशयहरूको यस महान् मञ्चमा म मेरो कुराको सुनुवाइ गर्न अनुरोध गर्दछु । (प्रभुतिर फर्केर) बोल्नुस् । अघि बढेर बोल्नुस् । साधु भएपछि अझै स्वतन्त्र भएँ भन्ठान्नुभएको होला । अझ परतन्त्री बन्नुपर्छ । सहमतिमा आए जे पनि सम्भव हुन्छ । असम्भव मेरो शब्दकोषमा छैन ।
प्रपन्नाचार्य ः– हो, प्रभु ! प्रभाको कुरा सत्य हो ?
प्रभु ः– (मनमनै) हुनसम्मको अल्छ्याइँ त मैले पनि प्रदर्शन गरेकै हुँ । म पनि श्रीमती जस्तै कमाउने भएको भए यस्तरी काम किन गर्नुपथ्र्यो ? ममा पुरुषत्व हराएको रहेछ । आफूले श्रीमतीबाट अपहेलनना पाएँ भन्दैमा अरूलाई पनि भड्काउँदै हिँड्नु किमार्थ उचित होइन । यो फत्तुरको सन्याश्रम रोज्नुभन्दा कर्मशील बन्नु लाख गुणा उत्तम हो । मसँग पाखुरी चलाउने क्षमता पनि छ । सानो तिनो जागिर खाने योग्यता र अनुभव पनि छ । अरूका श्रीमतीले कमाउँदैनन्, मेरीले कमाउँछे । आखिरमा आम्दानी बढ्नु र बढाउनु त उत्तम हो नि । मैले पनि उत्पादनमुखी अन्य काम गर्न थालेँ पछि त श्रीमतीले त्यस्तो व्यवहार नगर्ली ।
प्रपन्नाचार्य ः– के हो ? किन बोल्दैनौ ?
प्रभु ः– (सर्माउँदै) हो, सबै कुरा सही हो ।
प्रपन्नाचार्य ः– प्रभु, सही पनि भन्छौ, अर्थोक केही पनि बोल्दैनौ । बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्नुपर्छ ।
प्रभु ः– (मुण्टो हल्लाउँदै र केही सर्माउँदै) हो, म नै गलत हुँ । पुर्खेउली धन बढाउँनु पर्नेमा सक्दै गएँ । पत्नीको सर्त मान्नुपर्नेमा लत्याउँदै गएँ । कस्तुरी मृगले आफ्नै नाभीबाट निस्केको बासना थाहा नपाई रनवन डुलेझैँ म पनि दगुरेँछु । (प्रभातर्फ फर्केर) अब म होसमा आएँ । मेरो पुनर्जन्म भयो । जसरीे भए पनि कमाउँछु अब । पाखुरी चलाएर होस् या दिमाख खियाएर होस् । जबसम्म मेरो मति सुधारोन्मुख र उत्पादनमुखी हुन्छ तबसम्म मलाई तिमी त्यो गतिमा लग्न पाउँदिनौ जुन गति मेले भोगेर आएको छु । (प्रभा खुशी हुन्छे र सर्माउँदै प्रभुका हात समाउँछे । ऊ पनि खुसी हुन्छ । सबैले ताली बजाई रहन्छन् । पर्दा विस्तारै खस्दै जान्छ ।)